Ciidamada Ahlusunna iyo ciidanka dowlada oo dib u qabsadey Beled-Xaawo – idalenews.com
Wararka naga soo garaya magaaalada Balad Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa waxaay tibaxayaan in Ciidamada Ahlusunna oo gacan ka helaya kuwa dowlada ay dib gacanta ugu dhigeen Magaalada Balad xaawo.
Dib u qabsashada Magalaada Balad xaawo ayaa timid ka dib Marki galabta si lama filaan ah ay qaybo ka mid ah Magaaladaasi gudaha ugu soo galeen Ciidamada A-Shababaab .
Dagaal Faraha looga gubtay oo ay dib u soo qaadeen Ciidamada Ahlusunna oo taagera ka helaya Ciidamada Dowlada Somalia ayaa waxaa uu suurto gashey in Magaalada ay dib ugu gacan gasho Ciidamada huwanta ah.
Hadda magaalada Balad Xaawo waxaa dhex wareegaya Ciidamo badan oo ka tirsan huwanta waxaayna wadaan baaritaan ay ku samaynayaan qaar ka mid ah Xaafadaha Magaaalada Balad Xaawo.
Inta la xaqiijiyay dagaalkaasi waxaa ku dhimatay 10 qof dhawacana intaasi waa ka badan yahay waxzaa sido kale intaasi dheer oo la xaqiiijiyay in Xarakada Al-Shabaab ay Maydad uga dhintay dagaalka horay u sii qadatay.
Dagaalka ayaa waxaa ka hadlay Maamulka Ahlusunna ee ka arimiya Balad xaawo iyo Masuliyiin ka tirsan Dowlada Somalia oo ku sugan gobolka Gedo waxaayna shegeen in Xarakada Al-Shabaab ay ku fashilantay dagaalki ay soo qaday jabweyna ay garsiyeen.
Idale News Nairobi
Ahmed Nuure Awdiini, gudoomiyihii ganacsatada suuqa Bakaaraha oo Muqdisho lagu toogtey